Inboxer: Waa macmiil wanaagsan oo Google Inbox ah oo loogu talagalay Linux | Laga soo bilaabo Linux
Google Mailkooda wuu ogolaaday ku maaree emailka qaab aad waxtar u leh, oo leh urur in Ujeeddadeedu waa inaan si dhakhso leh u ogaanno wax kasta oo na xiiseeya, kaas oo sidoo kale leh shaqooyin fiican oo lagu qorsheeyo dirista waraaqaha iyo xusuusin sax ah. Tani waa sababta ay muhiim u tahay in la helo a Macmiilka Inbox Google ee Linux iyo ilaa hada Sanduuqa sanduuqa Waa mid ka mid ah kuwa aan ugu jeclahay, fudeydkiisa iyo maaraynta xusuusta aadka u fiican, marka lagu daro tirada badan ee kumbuyuutarrada gaaban ee ka dhigaya maareynta emaylkeenna mid aad u dheereeya.
1 Waa maxay Inboxer?
2 Sidee loo rakibaa macmiilka Google Inbox ee Linux?
Waa maxay Inboxer?
Waa macmiil wanaagsan Google Inbox ee Linux.
Qalabka ayaa noo oggolaanaya maareeyaan akoonno badan oo sanduuq hab fudud, xitaa waxay leedahay suurtagalnimada in had iyo jeer lagu dhejiyo dusha shaashaddayada oo noo oggolaaneysagacanta ku hayso sanduuqayaga marwalba. Qaab dhismeedkeedu waa wax iska fudud, oo leh maareynta tag sanduuqa, maaraynta saxeexa, maaraynta jadwalka, xakamaynta soo jeedinta, maaraynta qaabka sare ee jawaabahaaga, iyo waxyaabo kale.
Inboxer waa habka ugu fudud ee loo maareeyo Inbox-kaagaWaa dhakhso, iyadoo la isticmaalayo xusuusta hoose, oo lagu daray hawlo shaqo, oo leh interface fiican iyo ili furan inta badan, bilaash iyo bilaash.
Sidee loo rakibaa macmiilka Google Inbox ee Linux?
Rakibaadda Inboxex waa wax iska fudud tan iyo markii ay qaybiso muuqaal la jaan qaadaya nooc kasta oo Linux ah sidoo kale waxay leedahay .deb loogu talagalay Ubuntu-ku-saleysan distros. Kaliya waa inaan tagnaa aagga dajinta qalabka halkaasoo ay tahay inaan kala soo baxno nooca ugu dambeeya ee xasiloon qaabkii la rabay oo aan ku rakibeyno, haddii ay dhacdo inaad soo dejiso appimage tallaabooyinka rakibaadda waa kuwan soo socda: inboxer-0.2.0-x86_64.
chmod a + x inboxer- [v] -x86_64.AppImage # Ka dhig AppImage mid la fulin karo
./inboxer-=víritu-x86_64.AppImage # Ku rakib oo socod Bal qiyaas
Marka laga hadlayo .deb, ku rakib maareeyaha xirmada ee aad dooratay. Waa inaan isla markiiba la galnaa koontadeena si aan ugu raaxeysan karno maamul heer sare ah oo sanduuqayaga laga helo codsi deg deg ah, fudud oo wax ku ool ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Inboxer: Macaamil wanaagsan oo Google Inbox ah oo loogu talagalay Linux
Waxaan ku tijaabiyey anigoo ka soo rakibaya faylka .deb ee Ubuntu 16.04 LTS waxaanan jeclaa sida ay u shaqayso iyo sida ay u eg tahay.
Inta soo hartay, waad ku mahadsan tahay wax ku biirinta, Lagarto
Ku jawaab zakar
Waad ka xidhi kartaa ikhtiyaarka ku yaal geeska bidix, waxaad soo bandhigeysaa menu-ka halkaana ikhtiyaarka ayaa u muuqda
Ku jawaab CRAG
Shirkadayada waxay bixisaa kaabis geedaha ah. Eeg bartayada wax ku biirisa caafimaadka haddii aad rabto inaad hagaajiso caafimaadkaaga. Shirkadeena waxay bixisaa farmashiye kala duwan. Eeg boggayaga wax ku kordhinaya caafimaadka haddii aad rabto inaad xoojiso caafimaadkaaga. Shirkadeena waxay bixisaa alaabada aan dawooyinka laguu qorin. U fiirso websaydhkeenna wax ku biirinaya caafimaadka haddii aad rabto inaad si fiican u muuqato. Shirkadeena waxay bixisaa alaabada guud ee caafimaadka geedaha ku saleysan. Booqo degelkeenna wax ku biiriya caafimaadka haddii aad rabto inaad xoojiso caafimaadkaaga. Boggeena waxaa laga helaa daawooyin aan dhakhtar qorin oo kala duwan. Booqo degelkeenna caafimaad haddii ay dhacdo inaad rabto inaad sifiican u ekaato iyadoo lagaa caawinayo waxyaabaha guud ee la isku daro. Shirkadeena waxay bixisaa noocyo kala duwan oo daawooyin aan dhakhtar qorin. Eeg bartayada caafimaad haddii ay dhacdo inaad rabto inaad caafimaad dareento caawimaad guud oo dheeri ah.
Shirkadeena waxay bixisaa noocyo kala duwan oo daawooyin aan dhakhtar qorin. Eeg boggayaga caafimaad haddii ay dhacdo inaad rabto inaad caafimaad dareento iyadoo lagaa caawinayo noocyo dheeri ah. Shirkadeena waxay bixisaa noocyo kala duwan oo ah alaabooyin aan dhakhtar qorin. Booqo bartayada caafimaad haddii ay dhacdo inaad rabto inaad xoojiso caafimaadkaaga iyada oo lagaa caawinayo noocyo dheeri ah. Shirkadeena waxay bixisaa noocyo kala duwan oo ah alaabooyin aan dhakhtar qorin. Booqo bartayada caafimaad haddii ay dhacdo inaad rabto inaad ku horumariso caafimaadkaaga iyadoo laga caawinayo alaabada guud ee caafimaadka. Boggeena waxaa laga helaa daawooyin aan dhakhtar qorin oo kala duwan. Bal eeg boggayaga caafimaad haddii ay dhacdo inaad rabto inaad ku xoojiso caafimaadkaaga caawimaad kaabayaasha guud. Shirkadeena waxay siisaa alaabooyin caafimaad. U fiirso bartayada wax ku biirisa caafimaadka haddii aad rabto inaad caafimaad dareento.
Ku jawaab CharlesAlifs